N'ụzọ na-eju anya, ndị nwere obiọma kpọrọ m oku na ya Bitwise Ngwọta ka ha buru ndi obia na nzuko TechPoint na Fraide a. Ekele dịrị Ron na Kim maka ọkpụkpọ òkù ahụ! Mark nyere m ụbọchị ezumike ịga ma enwere m ekele maka ya. Nke a bụ 'obere obodo' ma a bịa na teknụzụ, echere m na ọ dị mkpa ka anyị jigide njikọ anyị na ụlọ ọrụ ndị ọzọ nwere teknụzụ yana mmalite ndị ọzọ!
Y’oburu na ino n’obodo ma iga na nzuko TechPoint, aga m ahu gi ebe ahu! Obi dị m ụtọ izute Jim Jay na netwọk na ndị isi mpaghara ndị ọzọ na mpaghara teknụzụ na-eto eto ebe a na Indianapolis.